Waa tuma fanaanadda laga soo tarxiilay Iiraan ee 200 oo safar dunida ku martay? - BBC News Somali
Waa tuma fanaanadda laga soo tarxiilay Iiraan ee 200 oo safar dunida ku martay?
Lahaanshaha sawirka instagram/@jossstone
Image caption Joss Stone
Fanaanada u dhalatay dalka Ingiriiska, Joss Stone ayaa loo diiday inay gasho dalka Iiraan, waana dalkii ugu dambeeyay ay ku mareyso booqashadeeda gaareyso 200 oo safar ah guud ahaan dunida.
Fanaanadan 32 jirka ah ayaa muuqaal soo gelisay baraha bulshada xilli ay ku sugneyd jasiiradda Kish, waxay tiri "Waana la xiray, waana inala soo tarxiilay"
Waxay sheegtay in dowladda Iiraan aysan haweenka u ogoleyn ciyaaraha qoob ka ciyaarka ee lagu soo bandhigo bandhig faneedyada.
"Waxay u muuqataa in mas'uuliyiinta aysan rumeysneyn in aanan soo bandhigeyn heeso balse way nasoo aadeen iyagoo nagu oronayo waxaad kamid tihiin dadka liiska ku jiro" ayay tiri Joss Stone.
Waxay intaas ku dartay "In wadahadallo dheer kaddib la xiray islamarkaasna subixii la tarxiilay"
Ka gudub Instagram daabacaad W.Q jossstone
Dhammaadka Instagram daabacaadda qore jossstone
Jasiiradda Kish waxay ku taalla dhinaca Koonfureed ee xeebta waddanka Iiraan, waana goobta kaliya ah ay booqan karaan dadka shisheeye iyagoo aanan u baahan wax dalkugal ah.
Waa tuma fannaanadda Soomaaliyeed ee ruxday masraxyada Yurub?
Gabadh Soomaali ah oo taariikh cusub ka samaysay Maraykanka
Waxay sidoo kale ka dhawaajisay in mas'uuliyiinta laanta socdaalka ee jasiiradda ay kula taliyeen inay aaddo saafaradda Ingiriiska uu ku leeyahay magaalada Tehran si ay ugu sahlaanto sidii ay dib ugu noqon laheyd dalkeeda.
Horraantii toddobaadka, Stone waxay baraha bulshada soo gelisay sawirro ay ku sheegeyso inay safar kaga soo laabatay dalka Yemen oo ay ka taagan yihiin dagaallo.
Fanaanada waxay sheegtay in markii ay ku sugneyd Yemen loo ogolaaday inay bandhig faneed kusoo bandhigto goob ay isugu yimaadeen rag iyo haween, waxaana u ogolaaday Barasaabka gobolka Al-Mahra, waxaa uu gobolkaas ku yaalla xadka Yemen uu la wadaago dalka Cumaan, waana deegaan ka fog meelaha ay isku hor fadhiyaan dagaalyahannada taabacsan dowladda iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Joss Stone, safarkeedii 198-aad waxay ku tegtay dalka Libya, halkaas oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeyo maleeshiyaadka uu hoggaamiyo Janaraal Khaliifa Haftar iyo dowladda Libya ee taageerada ka helo Qaramada Midoobey.
Stone waxay sannadkii 2014-kii bilaawday safar ay dunida ku mareyso si ay u dhiirogeliso fanaaninta maxalliga ah ee soo bandhigo ciyaaraha ama heesaha dhaqanka.